Olee Ebe A Mụrụ Jizọs, Oleekwa Mgbe A Mụrụ Ya? | Ihe Ndị Mere ná Ndụ Jizọs
GỤỌ NKE Alur Amharic Arabic Armenian Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bicol Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano Chichewa Chitonga Chitumbuka Cibemba Croatian Dangme Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Fijian Fon French Ga Georgian German Greek Guarani Gujarati Gun Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hungarian Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Jula Kabiye Kazakh Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisonge Kongo Korean Lingala Luganda Luo Macedonian Macua Malagasy Malay Maltese Mauritian Creole Maya Moore Myanmar Nigerian Pidgin Norwegian Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Quechua (Cuzco) Romanian Russian Samoan Sango Sena Sepedi Serbian Serbian (Roman) Seychelles Creole Shona Silozi Sinhala Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tahitian Tajiki Tatar Thai Tigrinya Tshiluba Turkish Turkmen Tuvaluan Twi Tzotzil Ukrainian Umbundu Uruund Uzbek Vietnamese Wallisian Waray-Waray
A MỤRỤ JIZỌS NA BETLEHEM
NDỊ ỌZỤZỤ ATỤRỤ ABỊA LETA JIZỌS MGBE A MỤRỤ YA ỌHỤRỤ
Siza Ọgọstọs, eze na-achị Alaeze Ukwu Rom, nyere iwu ka onye ọ bụla gaa deba aha ya n’akwụkwọ. N’ihi ya, Josef na Meri ga-aga deba aha ha n’akwụkwọ n’obodo ha bụ́ Betlehem, nke dị n’ebe ndịda Jeruselem.
Ndị gara Betlehem ideba aha ha n’akwụkwọ hiri nne. Ọ bụ ya mere na naanị ebe Josef na Meri hụrụ ha ga-anọ bụ n’ụlọ anụ, ebe a na-edebe ịnyịnya ibu na anụmanụ ndị ọzọ. Ọ bụkwa ebe ahụ ka a nọ mụọ Jizọs. Mgbe Meri mụchara ya, ọ ji ákwà fụọ ya ma nyiwe ya n’ime ihe e ji etinyere anụ ụlọ nri.
Ọ ga-abụ Chineke mere ka Siza Ọgọstọs tie iwu a ka onye ọ bụla gaa deba aha ya n’akwụkwọ. Gịnị mere anyị ji kwuo otú ahụ? Ọ bụ n’ihi na iwu a mere ka e nwee ike ịmụ Jizọs na Betlehem, n’obodo nna nna ya bụ́ Eze Devid. Ọ dịla anya Akwụkwọ Nsọ kwuru na ọ bụ n’obodo a ka a ga-amụ Onye Ọchịchị ahụ e kwere ná nkwa.—Maịka 5:2.
Abalị ahụ a mụrụ Jizọs pụrụ nnọọ iche. E nwere ìgwè ndị ọzụzụ atụrụ nọ n’ọhịa n’abalị ahụ na-azụ atụrụ ha. Ha hụkwara ka ìhè nwuru gburugburu ebe ha nọ. Ìhè a bụ ebube Jehova. Otu mmụọ ozi Chineke gwara ha, sị: “Unu atụla egwu, n’ihi na, lee! ana m ezisara unu ozi ọma banyere oké ọṅụ nke ndị niile ga-enwe, n’ihi na a mụụrụ unu Onye Nzọpụta taa, onye bụ́ Kraịst Onyenwe anyị, n’obodo Devid. Nke a ga-abụkwara unu ihe ịrịba ama: unu ga-ahụ nwa ọhụrụ e ji ákwà fụọ, nke dina n’ihe e ji etinyere anụ ụlọ nri.” Na mberede, ọtụtụ ndị mmụọ ozi bịakwutere mmụọ ozi ahụ, na-eto Chineke. Ha sịrị: “Ka otuto dịrị Chineke n’ebe kasị elu, ka udo dịkwa n’elu ụwa n’etiti ndị Chineke meere amara.”—Luk 2:10-14.
Mgbe ndị mmụọ ozi ahụ lawara, ndị ọzụzụ atụrụ ahụ gwara ibe ha, sị: “Ka anyị garuo Betlehem ozugbo ma hụ ihe a merenụ, dị ka Jehova mere ka anyị mara.” (Luk 2:15) Ha gawara ngwa ngwa ma hụ nwa ọhụrụ ahụ bụ́ Jizọs n’ebe mmụọ ozi gwara ha na ha ga-ahụ ya. Mgbe ndị ọzụzụ atụrụ ahụ nọ na-akọsa ozi ọma a mmụọ ozi ahụ ziri ha, o juru ndị niile nụrụ ya anya. Meri buuru okwu a niile n’obi, na-eche ihe ha pụtara.
Taa, ọtụtụ ndị kweere na ọ bụ na Disemba 25 ka a mụrụ Jizọs. Ma, na Betlehem, ọnwa Disemba bụ oge udu mmiri na oge oyi. Mgbe ụfọdụ, snoo na-adadị. N’ụdị oge a n’afọ, ndị ọzụzụ atụrụ agaghị akpọrọ atụrụ ha nọrọ n’èzí n’abalị ruo mgbe chi bọrọ. Ihe ọzọkwa bụ na o yighị ka eze na-achị Alaeze Ukwu Rom ọ̀ ga-enye iwu ka ndị na-achọ ihe ha ga-akụdo aka gbaa ọchịchị ya mgba okpuru gaa ije ga-ewe ha ọtụtụ ụbọchị n’oge ezigbo oyi na-atụ iji deba aha ha n’akwụkwọ. E nwere ọtụtụ ihe na-egosi na ọ ga-abụ n’ọnwa Ọktoba ka a mụrụ Jizọs.
Olee ihe mere Josef na Meri ji gawa Betlehem?
Olee ihe dị ebube merenụ n’abalị ahụ a mụrụ Jizọs?
Olee ihe mere na mmadụ ekwesịghị ichewe na a mụrụ Jizọs na Disemba 25?